Ma Jiro Dhalasho Fiican! 500 Akhriste Quudin! | Martech Zone
Wednesday, April 18, 2007 Axad, Febraayo 5, 2017 Douglas Karr
Mawduuc, Xamaasad, Hawlgal… kuwan ayaa ah saddex cunsur inaan la hadlo macaamiishayda markay tahay blogga. Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in baloog garaynta ay tahay dadaal nacasnimo ah - gaar ahaan markaad kahadleyso guushaada blogga. Colaadda, dabcan, waa maxay sababta qofna kuu dhageysan doono haddii aad tahay ma guulaystay? Waxaan soo dhejiyaa tirada quudinta oo waxaan sii hayaa Darajadayda Technorati iyo macluumaadka kale si aan u bixiyo si aan u bixiyo caddaynta guusha mawduucyada blogkayga.
Berri waa dhalashadaydii. Inta badan waan aamusanahay dhalashadeyda maxaa yeelay waa maalin nasiib darro ku ah taariikhda. Wakhtiyadii ugu dambeeyay, waxay noqotay toddobaad musiibo ah (hadda ku dar Virginia Tech liiska xun ee dhacdooyinka).
Si kastaba ha ahaatee, anigu ma caawin karo laakiin jadwalkaan kor u dhig oo waad ku mahadsan tahay dadyowga hadiyadda ugu wanaagsan ee dhalashada ee nin codsan karo! (Ka sokow carruurtayda iyo kuwa kale AppleTV Sharcigaas iyo Carla waa i helay.)
Waxaan ku garaacay in ka badan 500 akhristayaal quudinteyda maanta!
Waad ku mahadsan tahay qof walba inuu ku dhagan yahay! Lamaane isbuucyo kahor Waxaan gudbiyay qoraalkeygii 500-aad. Waxaan sii wadaa inaan isku dayo inaan dhiso wax weyn content, aniga hamiday waa sidii hore sidii hore, iyo dardar of my blog sii! Waxaan ka akhriyay meel kaliya 1% booqdayaasha ayaa si dhab ah uga faalloon doona. Haddii aad xishoonayso oo aadan dareemayn, kaliya ogow inaan runtii u qaddarinayo shirkaddaada!
Hal xusuus muhiim ah: mahad Gaarka ah John Chow yaa igu dhiirrigeliyay inaan sameeyo isbeddello si aan ugu soo jiito akhristayaal badan quudintayda. Waxaad ogaan doontaa qoraalka yar ee maqaalka hoostiisa ku casuumaya inaad ku biirto quudintayda. Sidoo kale, waxaan bixiyaa xayeysiis sannadka bilaashka ah ee martigelinta quudintayda dhexdeeda. Tilmaamaha John, waxaan u malaynayaa in aan yara dardar geliyay korsashadayda RSS. Mahadsanid John!
Tags: john chowAkhristeRSSfarsamoguul
Thunderbird ayaa timid! Tilmaamaha qaar waa dilaa, kuwa kalena waa in la dilaa!
Hambalyo maalinta 500aad iyo Dhalasho Wacan oo Fiican!
Si fiican ayaa loo qalmay, sii wad mawduucyada weyn waxaadna noqon doontaa 1000 waqti aan dheereyn!
waad ku mahadsan tahay lvl
hambalyo iyo dhalasho wacan!
Hambalyo Doug, si fiican buu u qalmay!
james kingsted - Macluumaadka Domain
Waan ku faraxsanahay adiga, hambalyo iyo dhalasho wacan!
Waxaan dhawaan bilaabay akhriska bartaada waxaanan u malaynayaa inay tahay khayraad la yaab leh. Waxaan ku qancay inaad haysato ilo qiimo leh. 500aad waa wax layaableh. Sii wad shaqada wanaagsan ee aan rajeynayo inaan aqriyo qoraaladaada mustaqbalka.
Waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan ee James! Jawaab celinta sidan oo kale ah marwalba waa la soo dhaweynayaa. 🙂
Hambalyo, iyo dhamaanba waxa ugu fiican dhalashadaada 29aad 😉
… Iyo keeg weyn oo dhalasho, caafimaad, iyo ugu dhakhsaha badan-2500 ee Technorati.
Mahadsanid Martin. Waad ka maqantahay 10 sano, in kastoo. Hal jiho oo gabow, kan kalena biseyl. Ma dhihi doono kan waa kee, in kastoo! 🙂
Hambalyo runtii Doug ..
500 oo akhristayaasha quudinta ah micnaheedu maahan wax micno leh .. Waxay kaliya muujineysaa dadaalka aad u gashay sidii aad u joogteyn lahayd ..
Shaqo wacan oo sii soco
Hambalyo! Taasi waa guul weyn! BTW, taasi waa qalooca koritaanka ee wanaagsan.
Mahadsanid Thor. Waxaan u maleynayaa in qalooca koritaanku uu markhaati u yahay xawaareynta in ka badan wax kasta oo kale. Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa inaan ku dabakho xoogaa falanqayn tirakoob ah oo ku saabsan tirada qoraalada waqti ka dib oo leh natiijooyinka mashiinka raadinta iyo meelaynta. Waan hubaa inuu jiro xiriir wanaagsan halkaas. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan xisaabta sameyn doonaa!
Dhalasho Wacan, iyo hambalyo # 500! Waad ku mahadsantahay waxaad sameysay.
Doug, hambalyo Gabi ahaanba u qalmay. Waan jeclahay boggaaga iyo waxyaabaha ku jira. Sii wad shaqada weyn. Iyo, Dhalasho Wacan.
Hey Doug - Wadada loo maro! Iyada oo ku saleysan waxyaabaha weyn ee aad bixiso, waxaan sharad ku dhigayaa wadada 1000 ayaa dhakhso u noqon doonta.